Kube bomvu iTheku kumasha izisebenzi - Ilanga News
Home Izindaba Kube bomvu iTheku kumasha izisebenzi
Kube bomvu iTheku kumasha izisebenzi
Bebekhala nangokungakhushulwa kwamaholo
BEKUBOMVU imigwaqo eThekwini ngesikhathi amalungu eCosatu emasha ekhala ngenkohlakalo, wukuntenga komnotho nezinye izinkinga ezikhungethe izwe. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
UBONA singabanga namthelela otheni emnothweni wezwe isiteleka sezinyunyana ebesiyizolo ngoLwesithathu umhlaziyi wezomnotho, uSolwazi Bonke Dumisa njengoba ethi iningi labantu abebeyingxenye yaso, kungabasebenza kuhulumeni, abaqashwe ezinkampanini ezizimele okuyibona abafaka imali eningi emnothweni, bebeqhubeka besebenza.
Ukhuluma kanjena nje, izolo iCosatu, iSaftu, yiDenosa, iNatu nezinye izinyunyana bangenele ukhukhulelangoqo wemashi bekhala ngenkohlakalo, ukuntenga komnotho nokungakhushulwa kwamaholo ngokwesethembiso sikahulumeni seminyaka emithathu nodlame olubhekiswe kwabesifazane.
EThekwini imashi iqale sekudlule isikhathi ibisuka eCurries Fountain Sports Development Centre, yaze yayophelela esiteshini samaphoyisa eDurban Central.
Abanikazi bezitolo eziningi enkabeni yeTheku bazivalile ngesikhathi abamashayo begudla eduze kwazo.
Ekhuluma uNobhala weCosatu KwaZulu-Natal, uMnu Edwin Mkhize, uthe inkohlakalo kufanele iphele ngoba izinto zonakele kangaka nje, kungenxa yabantu abafuna ukuzicebisa bona.
“Lesi sinyathelo sokulwa nenkohlakalo esisithathayo njengeCosatu, masiqhubeke. Ukuboshwa kwabantu abaningi kangaka ngoKlebe, kuwubufakazi bokuthi izimpande zenkohlakalo sezigxile kanjani kuleli lizwe.
“Bonke abantu ababandakanyeka enkohlakalweni kufanele baboshwe,” kusho uMnu Mkhize.
*EGoli isiteleka siphelele eBaragwanath Hospital, eSoweto lapho bebemasha ngaphandle kwamasango esibhedlela, becula amaculo omzabalazo, beklolodela abebeqhubeka nokusebenza bebathuka, bebabiza ngamagundane.
Umgcinimafa weNupsaw, uMnu Neo Masheke, uthe abezempilo babizwa ngamavulandlela, kodwa basebenza ngaphansi kwezimo ezibucayi, benganikwa ngisho imihlomulo, nezinto zokuzivikela.
“Simi lapha ngaphandle nje, kukhona abangaphakathi bayasebenza, yingoba abaqashi baqhubeka nokudala uqhekeko kithina sisodwa siyizisebenzi.
“Basitshela ukuthi njengoba sizolwela amalungelo ethu, ngeke sihole ngoba bathi ongasebenzile ngeke ahole,” kusho uMnu Masheke.
* ECape Town imashi iqale KwaLanga yaphelela eCivic Centre lapho kwethulwe uhlu lwezikhalo kwiziphathimandla.
UMnu Malvern De Bruyn, ongunobhala weCosatu eWestern Cape, obehola le mashi, uthe inkohlakalo nokukhwatshaniswa kwemali yesikhwama sabangasebenzi, i-UIF, ngezinye zezinto abafuna ziphele. Bheka nasekhasini 14.
Previous articleIphoyisa “lidubule labulala umfowabo”
Next articleUdliwe wabeka izaba umqeqeshi weBafana